Iindidi zeetafile zebhedi ezi-6 zokubonelela igumbi lokulala | IBezzia
Iindidi zeetafile zebhedi ezi-6 zokubonelela igumbi lokulala
UMaria vazquez | 30/04/2021 18:00 | Ifenitshala
Iindawo zokuma ebusuku ziyinxalenye yelo qela lefanitshala sibona kubalulekile kwigumbi lokulala. Bangamadlelane amahle ukonyusa umthamo wokugcina kwigumbi lokulala kwaye kubalulekile ukuba babe nazo zonke ezo zinto sinokuzidinga xa silala kwaye sivuka.
Zeziphi izinto ozisebenzisayo ngaphambi kokuba ulale naxa uvuka? Zeziphi ezinye izinto ngaphandle kwezo onqwenela ukukwazi ukuzilungiselela kwibala lasebusuku? Funda iimfuno zakho ezibonakalayo, misela ukuba loluphi uhlobo lwe-nightstand efanelekileyo ye-aesthetics yegumbi lokulala kwaye ukhethe eyona ilungele iimfuno zakho.
2 I-Nordic iphefumlelwe
3 Uhlobo oluqhelekileyo nolunobunkunkqele
Ii-nightstands ezidadayo lolunye uhlobo olukhulu hombisa iindawo ezincinci. Xa ungenasithuba sikhulu macala omabini ebhedi okanye awufuni kugcwalisa igumbi kwakhona ngefenitshala enkulu, ezi zinto ziba lihlakani elikhulu ngenxa yezizathu ezahlukeneyo:
Ziyakhanya ngokubonakalayo. Bonyusa imvakalelo yokuphanga kwigumbi apho babekwe khona.
Zithatha indawo encinci. Ubungakanani beemodeli ezininzi ezidadayo ziya kukuvumela ukuba uzibeke kwiindawo ezincinci apho itafile esemgangathweni ingenandawo.
Bavumela ukucoca umgangatho kamnandi. Zixhomekeke eludongeni ezibathintela ekuhambeni. Nangona kunjalo, ngenxa yokuphakanyiswa, baququzelela ukucocwa kwemihla ngemihla kwegumbi.
Bahombisa kakhulu. Ngokuma ngaphandle kweetafile zesiko, zinika igumbi igumbi lokuchukumisa.
Iitafile zomthi ezidadayo namhlanje zithandwa kakhulu ukuhombisa igumbi lokulala ngenxa yemfudumalo ebazisayo. Nangona abo bane uyilo oluncinci kwiitoni ezikhanyayo: abamhlophe, iikhrimu, zingwevu… bathathe indawo yokulala kumagumbi okulala aneeesthetics zale mihla. Ungabafumana kunye nedrowa enye okanye ezimbini ukonyusa umthamo wazo kunye / okanye nesibane esakhelweyo ngaphakathi ukuze kungabikho mfuneko yokubeka isibane kuso.
El isitayela se-nordic Sele kule minyaka ilishumi idlulileyo umlinganiso kuyilo lwangaphakathi. Ukudibanisa iinkuni zendalo kunye neenkcukacha ezimhlophe, iitafile zale ndlela zizisa ukukhanya kunye nobushushu kumagumbi okulala eendlela ezahlukeneyo. Kwimilenze emine, ngokubanzi banedrowa enye okanye ezimbini eziza kukuvumela ukuba ube nezinto ezibalulekileyo kufutshane nebhedi.
1. Ikhaya laseNunila-Kave, 2. I-Sklum, 3. I-Larsen-Made, 4. I-Sklum
Uhlobo oluqhelekileyo nolunobunkunkqele
Ngaba ubuhle kunye nobunkunkqele buchaza isitayile segumbi lakho lokulala? Ukuba kunjalo, ezi ndawo zokuma ebusuku ziya kulunga ngokugqibeleleyo. Abo badibanisa mhlophe ngokuqaqambileyo ngezinto zegolide Zezona zithandwa kakhulu ekuhombiseni amagumbi okulala aneendonga ezimhlophe, iisilingi eziphezulu ezibunjiweyo kunye neefestile ezinkulu.
Iitafile ezincinci ezenziwe ngu-Made kunye no-Ikea uchuku lwangoku, nangona kunjalo, ziya kunika igumbi lokulala Uyilo lombala omnyama iimilo ezichanekileyo kunye nesitayile esincinci. Ngaba unesibindi ngombala? Uyilo oludibanisa iimilo, imigca kunye neegophe, ezinje nge-Made's, ziya kunika igumbi lakho lokulala ibhalansi phakathi kweklasikhi kunye nenamhlanje.
Iitafile zesitayile sebhedi ngokubanzi zinobume besinyithi. Abanye baphefumlelwe kuyilo lwezo zitshixo zentsimbi ezazisetyenziswa ngaphambili kumzi mveliso, izibhedlele okanye iiyunivesithi, nangona zihlala zihlaziywa ngobume obunemibala kunye nombala.
1. Ikhaya leSavoi-Kave, 2.Bavi-Sklum, 3. Ikhaya leTrixie-Kave, 4. I-Nikkeby-Ikea, 5. I-Kluis-Miv Interiors Kuqhelekile ukufumana uyilo dibanisa intsimbi kunye nomthi ukulungiselela ukufezekisa uyilo olushushu. Ubuninzi bemvelo noburhabaxa kwezi zinto, kokukhona isitayile seshishini siyaphuculwa. Eyona nto i-homogeneous kunye ne-polished, ikufutshane ngakumbi kubuhle banamhlanje.
Ukubonelela ngothando kwigumbi lakho lokulala, awuyi kufumana iqabane elingcono kunalezo zokuma ebusuku ezibonakala ngathi zivele kwigumbi lika-makhulu wakho. Uyilo olunemilenze eguqulweyo, imigca egosogoso kunye neendawo ezimhlophe ezihluziweyo lukhetho olukhulu, nangona singekhe sibalahle abo banazo iipaneli zemesh okanye i-cannage.
1. Ikea, 2. Vilmupa, 3. Ikhaya laseKave, 4. IVilmupa
Abanakho ukuqaqamba okufanayo neendawo zokulala eziziingxande kwaye asikholelwa ukuba abasayi kuze babe nayo, kodwa bayindlela ethandwayo ethandwayo. Ngokubanzi yenziwa kwi Umthi we-lacquered kwiitoni ze-satin okanye nge-glitter, banamandla amakhulu okuhlobisa.
1.Khurb-Kave Home, 2. Odie-Made, 3. Cairn-Made, 4. Babel 02-Sklum
Ukukhanya okungaphaya, Banokusinika ukuya kuthi ga kwiidrowa ezintathu ukugcina izinto. Nangona kunjalo, ezi ngekhe zibenokusebenziseka njengalezo zinemilo yesikwere. Ngoba? Ngenxa yokuba kunzima ngakumbi, inikwe ubume bayo, ukuthatha ithuba lokugcina abasinike lona.
Loluphi uhlobo lokuma ebusuku onokukhetha ukulinika igumbi lakho lokulala?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ifenitshala » Iindidi zeetafile zebhedi ezi-6 zokubonelela igumbi lokulala
Ngaba kuyacetyiswa ukuba abantwana bahambe benganxibanga ezinyaweni?
Ngaba unesifo se-blancorexia? Ukuthambekela ekubeni namazinyo amhlophe